Websites Archives | Suubbis Blog
Xaqiiqo la yaab leh ayaa ah sida ganacsiyada intooda badan aysan haysanin websaydh. Waxaad u maleyneysaa in xilligan casriga ah qof kasta oo u ogaan lahaa sida ay muhiim ugu tahay website-ka ganacsigisa. ma Cada In Ganacsi kasta oo islamarkaas heysanin Websaydh …
Xawaaraha bogga waxaa lagu qeexay dhamaan waxyaaba ku jira bog gaar ah ee qaadanayo browser-ka si aad u hesho barta hore ee server-ka. In kastoo ay lamid tahay xawaaraha bogga ma aha mid la mid ah xawaaraha goobta. Xawaaraha goobta ayaa ah …